Waa maxay farqiga u dhexeeya maro jilicsan ee Talyaaniga iyo Holland velvet
Maxay yihiin faa'iidooyinka velvet Dutch-ka: Qulqulka 'Dutch fluff' waa mid buuran, qaab dhejis adag leh, dareen jilicsan oo jilicsan, raaxo leh inuu xirto, iyo adkeysi. Waxay si dabiici ah u fidsan tahay iyada oo aan timo daadin, lebbiska-bilaashka ah, iyo kicinta jirka aadanaha. Tuulbooyin ama siddooyin is dulsaaran oo maro jilicsan oo reer Dutch ah ayaa istaagaya ...
Waa maxay dharka maro jilicsan ee Holland
Maxaa loogu magac daray Holland Velvet? Dhar noocee ah ayaa ah maro jilif Dutch ah? Holland velvet, maro jilicsan oo heer sare ah, waxay leedahay astaamo badan. Suede waa mid aad u jilicsan oo maqaarka u roon, oo leh taabasho jilicsan, oo aad uga fiican sida caadiga ah maro jilicsan oo silk lagu sameeyo. Isla mar ahaantaana, waa mid qaro weyn oo jilicsan, aad u adag ...
Waa maxay dharka jilicsan
Waa maxay dharka jilicsan, sifooyinka iyo aqoonta dayactirka ee dharka maro jilicsan Dharka jilicsan waa dhar caan ah oo la yaqaan. Shiineeska, waxay u egtahay jilif jilicsan. Dhageysiga magacan, waa mid heer sare ah. Dharka jilifku wuxuu leeyahay astaamaha maqaarka u roon, raaxada leh, jilicsan oo diiran, iyo enviro ...